12 युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 12 युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
त्यहाँ धेरै आश्चर्यजनक शहरहरु यूरोप मा भ्रमण गर्न को लागी छन्. प्रत्येक शहर र सडक को आफ्नै चरित्र र आकर्षण छ. जीवन्त, महान क्याफेहरु भरिएको, बुटीक, सडक कला, परिष्कृत कला दीर्घाओं, र पर्यावरण-मैत्री, यदि तपाइँ यी मा हुनुहुन्न भने 12 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो छिमेक, यहाँ तपाइँको बाल्टी सूची पिन गर्न को लागी केहि कारणहरु छन्.
1. युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु: Neukölln, बर्लिन
मुख्य बाट टाढा पर्यटक आकर्षण बर्लिन, Neukolln छिमेकी यसको आफ्नै मा एक संस्थान हो. शान्त छिमेकी पुरानो र नयाँ को बीच एक मिश्रण हो, संस्कृतिहरू, शहरीता, र मनोरन्जन हरियो ठाउँहरु.
कबाब, आर्ट ग्यालरी, छत बारहरू हरियो पार्क को छेउमा Neukolln छिमेकी यूरोप मा सबैभन्दा राम्रो को एक बनाउन. एक महान दिन बाहिर बाहिर विशाल Tempelhofer फेल्ड, वा Britzer गार्डन तपाईं रमणीय Richardplatz गाउँ वा Klunkeranich कार पार्क छत पट्टी बदल्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ.
2. Holesovice, प्राग
हरियो पार्क, बियर बगैंचा नदी दृश्य संग, समकालीन कला संग्रहालय को केहि मात्र हुन् लुकेका रत्नहरू प्राग को सबैभन्दा राम्रो Holesovice छिमेकमा. Holesovice चेक कलाकारहरु र युवा परिवारहरु को लागी घर हो, Letna पार्क मा आफ्नो फुर्सत समय खर्च र धेरै बिस्ट्रो को आसपास मा भोजन.
प्राग मा एक पटक औद्योगिक क्षेत्र आज डिजाइनर र रचनात्मक दिमाग को लागी एक रचनात्मक ठाउँ मा बदलिएको छ. त्यसैले, यो आश्चर्य को कुरा छैन कि यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो छिमेकहरु मध्ये एक विचित्र कैफेहरु छन्, डिजाइन पसलहरु, र कला केन्द्रहरु.
3. युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु: Ostiense, रोम
Ostiense ठेठ इटालियन छिमेकी होइन, तर त्यो वास्तव मा के मा राख्छ 10 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो छिमेक. एक पूर्व कारखाना एक कला संग्रहालय मा रूपान्तरण, फव्वारे को सट्टा सडक कला, फैशनेबल क्याफेहरु, र 1 गैर-क्याथोलिक कब्रिस्तान जहाँ रोमान्टिक कविहरु कीट्स र शेलीले उनीहरुको अनन्त निद्रा को ठाउँ पाए Ostiense कुनै अन्य हुड जस्तै छैन.
इटालियन राजधानी मा एक पटक ग्रे स्थान बिस्तारै बिस्तारै जीवन्त रंग र रचनात्मकता को एक स्थान मा रूपान्तरण गरीएको छ. यसबाहेक, यहाँ तपाइँ Caius Cestius को असाधारण पिरामिड भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र यसको फ्रेस्कोको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, इटालियन खाना को लागी Eataly को लागी तपाइँको बाटो मा. यदि तपाइँ एक स्थानीय जस्तै बाँच्न चाहानुहुन्छ, फैशनेबल Ostiense मा आवास रोम मा भीड पर्यटक जिल्लाहरु भन्दा धेरै सस्तो छ.
4. दक्षिण Pigalle छिमेकी पेरिस
घुम्दै SoPi तल, Rue des शहीदहरु लाई, घर मा 200 क्याफे, chocolatiers, र बारहरु, दक्षिण Pigalle पेरिस मा यो ठाउँ हो. दक्षिण Pigalle को अलावा एक foodies स्वर्ग भएको छ, शान्त छिमेक जहाँ तपाइँ अद्भुत संग्रहालयहरु र कला खोज्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा विशेष संग्रहालयहरु मध्ये एक रोमान्टिक जीवन को संग्रहालय हो. Musee de La Vie Romantique मा तपाइँ फ्रान्सेली इतिहास मा रोमान्टिक अवधि को बारे मा तपाइँको ज्ञान को विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ.
राम्रो जीवन बाट एक ब्रेक को लागी, तपाइँ Pigalle को रंगीन बास्केटबल कोर्ट मा जान सक्नुहुन्छ. Pigalle बास्केटबल कोर्ट जीर्णोद्धार गरिएको छ, ज्वलन्त रंगहरु मा डिजाइन गरीएको, सबै भन्दा राम्रो बास्केटबल खेल को लागी. पेरिस एक महान छ छुट्टी गन्तव्य र सबैभन्दा धेरै मध्ये एक यूरोप मा महान बास्केटबल कोर्ट संग शानदार छुट्टी स्थानहरु.
5. युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु: अर्बट, मास्को
रंगीन र जीवन्त Arbat छिमेक मास्को शहर को केन्द्र मा सास हावा को ताजा छ. तपाइँ आकर्षण को पूरा Arbat पाउनुहुनेछ, रंगीन भवनहरु संग, क्याफे, र सडक कला. जब तपाइँ Arbat साथ टहल, तपाइँ विश्वव्यापी शहर को आत्मा पत्ता लगाउनुहुनेछ. प्रसिद्ध पुरानो Arbat सडक मास्को मा ऐतिहासिक Arbat क्वार्टर मा एक व्यापारी केन्द्र को रूप मा यसको महत्व संरक्षित छ, 15 औं शताब्दी बाट.
आजकल, Arbat पड़ोस ठाडो बुटीक भरिएको छ, स्मृति चिन्ह पसलहरु, शिल्प, र धेरै धेरै खजाना. साथै, जबकि यो क्षेत्र धेरै पर्यटकिय छ, तपाइँ यसलाई आराम पाउनुहुनेछ, र दर्शनीय. Arbat को सबै भन्दा राम्रो रमाईलो गर्न, तपाइँको मास्को यात्रा मा केहि दिन तल पिन गर्नुहोस्, कमसेकम. यो बाटो, तपाइँ मास्को को सबैभन्दा राम्रो र एक को सौन्दर्य को अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ रूस मा भ्रमण गर्न को लागी सबैभन्दा आश्चर्यजनक ठाउँहरु.
6. 7बुडापेस्ट जिल्ला
युवा र रमाईलो, बुडापेस्ट मा 7th जिल्ला यात्रुहरु को लागी एक आश्चर्य देश हो. महान बारहरु, बुडापेस्ट मा सबै भन्दा राम्रो भागने कोठा, एक साँझ बजार, र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु, यो छिमेक सधैं गुञ्जिरहेको छ, राम्रो तरिका मा. यो शान्त छिमेकी बुडापेस्ट मा यहूदी क्वार्टर पनि हो, तेसैले तपाइँ महान आराधनालय को भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै मा एक ल्याण्डमार्क.
यसबाहेक, पुराना सडकहरु हंगेरी संस्कृति को कायाकल्प को लागी एक उपजाऊ मैदान बनेका छन्. रेस्टुरेन्ट र पसलहरु को अतिरिक्त, मा मुख्य आकर्षण 7जिल्ला भग्नावशेष छ. तपाइँको सबैभन्दा राम्रो साथीको विवाह मनाउँदै, वा एक पुरानो quirky पट्टी मा जन्मदिन बाश मात्र बुडापेस्ट को सबैभन्दा राम्रो छिमेक को लागी एक विशेष अनुभव हो.
7. युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु: Langstrasse ज्यूरिख
सबैभन्दा लामो सडक को रूप मा अनुवादित, ज्यूरिख मा Langstrasse छिमेकी सबै चीजहरु तपाइँ समयनिष्ठ देश को बारे मा जान्दछन्. Langstrasse ज्यूरिख को नराम्रो केटा हो, हिप, adventurous, उज्यालो नियन रोशनी संग र सधैं पार्टी को लागी तयार छ. Langtrasse एक छmazing खाना स्थानहरु, बारहरू, र एक nightcap को लागी क्लबहरु, केवल तपाईंको छनौट लिनुहोस्.
यसबाहेक, सबैभन्दा राम्रो छिमेक मध्ये एक हो युरोप मा मित्रतापूर्ण LGBT गन्तव्यहरु. यहाँ तपाइँ LGBT- अनुकूल Les Garcons बार/पिज्जा ठाउँ मा आफ्नो नाली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि. निष्कर्षमा पुग्न गर्न, यो अचम्मको छिमेक बिरलै सुत्छ र यसको धेरै जातीय रेस्टुरेन्टहरुमा तपाइँलाई पूरा गर्दछ, दलहरू, र पक्कै पछि पार्टीहरु.
एक रेल संग ज्यूरिख को लागी Interlaken
लुसेर्न एक ट्रेन संग ज्यूरिख
बर्न एक ट्रेन संग ज्यूरिख
एक ट्रेन संग जिनेभा ज्यूरिख
8. एम्स्टर्डम उत्तर
विशाल हरियो ठाउँहरु, सुन्दर वास्तुकला, र आकर्षक सानो गाउँ, एम्स्टर्डम- Noord यो सबै मिल्यो. कूल छिमेक IJ नदी भर मा सही छ, त्यसैले Noords अद्भुत प्रदान गर्दछ पिकनिक स्पटहरू र प्रत्यक्ष संगीत gigs स्थानहरु. यी सबै आकर्षण को अतिरिक्त, एम्स्टर्डम- Noord यूरोप मा उच्चतम स्विंग को घर हो, एड्रेनालाईन प्रेमीहरुको लागी.
तथापि, यदि तपाइँ अधिक योजना बनाउनुहुन्छ सक्रिय छुट्टी त्यसपछि नदी को लागी एकदम सही छ बाहिरी गतिविधिहरु. साइक्लि, दौड, र डु bo्गा पनि, IJ नदी एकदम सही छ. तल्लो रेखा एम्स्टर्डम- Noord प्यारा एम्स्टर्डम शहर भित्र एक डच सानो संसार हो. विकल्प अनन्त छन्, र वातावरण शानदार छ, आश्चर्य को कुरा छैन कि यात्रीहरु यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो छिमेकीहरु को लागी फिर्ता आउँदैछन्.
9. युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु: Shoreditch लन्डन
धेरै यात्रीहरु लाई थाहा छ Shoreditch शानदार ईंट लेन बजार को लागी धन्यवाद. तथापि, Shoreditch महान स्वतन्त्र बुटीक मा एक को एक प्रकार को टुक्राहरु को लागी किनमेल गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँ हो. यो भित्ताचित्र चित्रित छिमेक को लागी अद्वितीय पक्षहरु को मात्र एक उदाहरण हो. Shoreditch तस्वीर-सही नहुन सक्छ, तर यो पक्कै यसको आफ्नै एक आत्मा छ.
ठीक छ किनकी Shoreditch ठेठ क्लासिक अंग्रेजी पड़ोस हैन, यो स्थानीय कलाकारहरुको घर बनेको छ. साथै, यो शहरी छिमेक बजार वा पप-अप मा सडक खाना को कोशिश गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँ हो, रूफटप सिनेमा मा एक फिल्म पकड र कुना को आसपास लुकेको पर्खाल कला को लागी हेर्नुहोस्. निष्कर्षमा पुग्न गर्न, Shoreditch को विशेष चरित्र यो लन्डन मा सबैभन्दा राम्रो छिमेक बनाउँछ.
10. Findhorn, स्कटल्याण्ड
अटलांटिक महासागर को दृश्य संग सुन्दर स्कटिश तट मा, Findhorn जादुई छ. जबकि मोराशायर मा स्थित छ, कोही यसलाई बस्ती भन्छन्, सहरको सन्दर्भमा छिमेक भन्दा. Findhorn एक शानदार छुट्टी गन्तव्य हो, विशेष गरी एक समुद्री किनार छुट्टी गन्तव्य. यहाँ, तपाइँ वाटरस्पोर्ट्स रमाईलो वा समुद्र तट मा आराम को लागी महान अवसरहरु पाउनुहुनेछ.
यसबाहेक, Findhorn एक अद्भुत पारिस्थितिकी गाउँ छ, र मनोरन्जन यात्रा आजकल धेरै प्रचलित छ. यो हरियो पक्ष आराम क्षेत्र को लागी एक फैशनेबल खिंचाव जोड्दछ, महान परिदृश्य र वातावरण संगै.
11. युरोप मा सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु: भेस्टरब्रो, कोपेनहेगन
Vesterbro मा बस्ने जो कोहीले यस शान्त छिमेकमा केहि सानो धेरै फरक छिमेकहरु छन् भन्नेछन्. एउटा जवान छ, मोहक, र एक पटक कोपेनहेगन को रातो बत्ती जिल्ला र अर्को यसको बारे मा एक फ्रेन्च ठाडो छ. Vesterbro कन्ट्रास्ट भरिएको छ, तेसैले कोपेनहेगन को पहिलो पटक को लागी जो कोहि पनी आफ्नो मनपर्ने को लागी केहि महान पाउनुहुनेछ.
अर्को शब्दमा, Vesterbro यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो छरछिमेक मध्ये एक हो किनकि यो केहि आश्चर्यजनक सबैलाई प्रस्ताव गर्न को लागी छ. हरियो ठाउँहरु बाट राम्रो रेस्टुरेन्टहरु लाई, ठाडो बुटीक, र Absalon समुदाय घर जहाँ तपाइँ स्थानीयहरु संग भोजन गर्न सक्नुहुन्छ, Vesterbro को समुदाय धेरै स्वागतयोग्य र सजीलो छ. त्यसैले, यो कुनै आश्चर्य को Vestrbro शीर्ष मा छ 10 हरेक वर्ष यूरोप मा coolest छिमेकीहरु.
12. पोर्टा भेनेजिया, मिलान
मिलान मा सबैभन्दा फैशनेबल छिमेकी, पोर्टा भेनेजिया मिलान को फैशन वीक होस्ट गर्दछ र एक धमाका संग शीर्ष बन्द 12 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो छिमेक. कला, इटालियन खाना, मिलान मा सबै भन्दा राम्रो किनमेल स्थलहरु बाट कुना को आसपास, अझै राखिएको Porta भेनेजिया सानो इटाली छ, भीड पर्यटन केन्द्र बाट टाढा.
पोर्ट भेनेजिया विला-कला कला दीर्घाओं समेटेको छ, क्याफे, र बगैचाहरु, आश्चर्यजनक Giardini Publici जस्तै. पोर्टा भेनेजिया को महान माहौल स्थानीयहरु लाई आकर्षित गर्दछ, प्रवासी, र यात्रीहरु ह्या hang्ग आउट गर्न को लागी, मिसाउनु, र मिलान समलैंगिक परेड को समयमा पार्टी, र हरेक दिन तब सम्म. त्यसैले, यदि तपाइँ एक योजना बनाइरहनुभएको छ सप्तान्तमा जानु मिलान मा, यो एक हप्ता लामो बनाउन राम्रो, कमसेकम.
हामी मा एक ट्रेन सेव तपाइँ को लागी एक यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 12 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो छिमेक.
के तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट "यूरोप मा 12 सबैभन्दा राम्रो छिमेकीहरु" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fcoolest-neighborhoods-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
cool coolestneighborhoodsEurope CoolNeighborhoods हिप Neighborhoods Trendyneighborhoodseurope